Android Fork ဖြင့်တရုတ် Giant နှင့် Dell တို့က Mobile ကိုစတင်မိတ်ဆက် Linux မှ
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးနှင့် Dell သည် Android Fork ဖြင့်မိုဘိုင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
မှ XDA-Developers.com ကျွန်ုပ်သည်ဤသတင်းကိုရယူပြီးယခုထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ... အင်္ဂလိပ်မှဗဟုသုတနည်းသောသူများသည်၎င်းကိုပျော်မွေ့နိုင်ရန် EN မှ ESP သို့ကျွန်ုပ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
Dell က y ဘိုင်ဒူတရုတ်နိုင်ငံသည်၎င်း၏ဈေးကွက်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသောတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးကိုအင်္ဂါနေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည် Streak Pro ကို (မှတဆင့် ComputerWorld) ။ ဒီကိရိယာမှာ ၄.၃ မျက်နှာပြင်ရှိတယ် AMOLED Resolution မှာ ၉၆၀ × ၅၄၀ တွင် Qualcoom 960 GHz dualcore ပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော်အထင်ရှားဆုံးမှာ၎င်း၏ operating system ဖြစ်သည် အမဲချိတ် de အန်းဒရွိုက် ကိုခေါ် Baidu ရီ၏န်ဆောင်မှုကိုအစားထိုးထားတဲ့ Google ၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဘိုင်ဒူ.
ဒါနဲ့ဆင်တူတယ် Kindle Fire de အမေဇုံGoogle ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို Amazon ၏နေရာတွင်အစားထိုးလိုက်သော Android ၏ဗားရှင်းအပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ Android တက်ဘလက်များကိုကောင်းစွာလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ Kindle Fire သုံးပတ်အတွင်းသန်းတစ်သန်းနီးပါးရောင်းချခဲ့သည်အတူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခြင်း, အတူတက်ဘလက် အန်းဒရွိုက် ယခုအချိန်အထိရောင်းအားအကောင်းဆုံး။ အမှန်တကယ်စျေးပေါသောစျေးနှုန်း (ဒေါ်လာ ၁၉၉ သာ) သည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ၊ အဓိကဆွဲဆောင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်သာမက၊ အားသာချက်လည်းဖြစ်သည် အမေဇုံ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဂီတစတိုးနှင့်အပြိုင်အဆိုင်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်စတိုးသို့ပြန်ဆိုသော "ဖျော်ဖြေရေး" ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည် Apple နှင့်အကြီးအကျယ်ဒီအဆင့်တွင် Google ကိုရိုက်နှက်။
တရုတ်သုံးစွဲသူအများစုသည်ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးကြပါ၊ သူတို့ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက... ယခုကကမ်းလှမ်းသောဤဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ ဘိုင်ဒူ, မှတ်သောတူညီသောလက်ခံမှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ် Kindle Fire.
ဤအရာအားလုံးသည်ပြိုကွဲခြင်းပြtheနာများကိုသာ ဦး စားပေးသည် အန်းဒရွိုက်အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲ Google လုံးဝ။ ၎င်းသည်အနာဂတ်အတွက်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက်အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ရှယ်ယာတိုးပွားမှုမြန်ဆန်သော်လည်းတိုးတက်ရန်မတွန့်ဆုတ်သော developer များနှင့်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် အပေါ် iOS ကို အသစ်က applications များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။
ဒီမှာသတင်းက the အဆုံးသတ်သွားတယ်
အဆုံး၌ဤသည်အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ဘူး အန်းဒရွိုက်။ ကောင်းပြီစဉ်းစားရအောင် ... ဒီ fork of for applications များကိုဖန်တီးတဲ့ developer များ အန်းဒရွိုက် တရုတ်၊ အဲဒီ app တွေကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာပါ အန်းဒရွိုက်ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံး will အကျိုးရှိလိမ့်မယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးနှင့် Dell သည် Android Fork ဖြင့်မိုဘိုင်းကိုစတင်ခဲ့သည်
ငါမသိပေမယ့်ကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Dell ဟာအာဖရိကမှာရှိတဲ့ distro နဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုရောင်းတဲ့အတွက်ဒါဟာဟန်ဆောင်မှုနည်းတယ်။
ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာတော့ Android မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာသိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမရှိတော့ဘူး။
အဆိုးဆုံးကတော့တရုတ်မှဖြစ်သည်။ အချို့သောနယ်ပယ်များ၌ Made In လုပ်ခြင်းသည် emos ကဲ့သို့ငိုခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်
အကယ်၍ သူတို့က Android ကို fork လုပ်ရင် Google နဲ့ Oracle ကိုပေးရမယ်။ တစ်ခုမှာ OS အတွက်တစ်ခုနှင့် java virtual machine ၏ fork Dalvik အတွက်ဖြစ်သည်။
"ubuntoso" အနေဖြင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာငါ distro ပါသော DELL PC ကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါ။ သူတို့ကြေညာကတည်းကကတည်းကအနည်းဆုံးမက္ကဆီကို။ စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း၎င်းကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းအများစုမှာ FreeDos ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ငါ Made In တရုတ်နှင့်သဘောတူသည်။
ubuntu ကိုသင်ထည့်လိုက်လျှင် dell spain ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် del ၏ ubuntu xd နှင့်အတူ pc ၏ပုံပေါ်သည်။
ငါစပိန်မှာတွေ့မြင်သောအရာကိုမှရှိ၏ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အတွက်ကွန်ပျူတာများဖြစ်သော်လည်းသာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်တော့သိပ်မများလှပါ။ မက္ကဆီကိုတွင်လူအများစုက Linux ကိုမသိသောကြောင့် Ubuntu နည်းသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမော်ဒယ်များကိုရှာဖွေ။ OS မှ၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာ Windows ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းများကိုလျှော့ချရန်မဟုတ်ပါ၊ ဈေးအသက်သာဆုံးပုံစံသည်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
Made in China တွင်ဂစ်တာများသည် shit ဖြစ်သည်။ Made In China တွင်အင်တင်ရှစ်များသည်တရုတ်ဆိုင်များတွင်ရောင်းသမျှအားလုံးသည် shit ဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်မေးခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက၎င်းတို့သည်ပတ်လမ်းသို့အာကာသစခန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်ကိုတင်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံအားလုံး၌မီလီမီတာဖြစ်သောဆောင်းပါးများကိုထုတ်ဝေသည်။
ဥပမာ - ၀ န်ကြီးချုပ်ထံမှဂျပန်တည်ဆောက်သူ။ ထို့အပြင်အကွာအဝေးအလိုက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကွာအဝေး၏ထိပ်သို့သွားလျှင်၊ သူတို့သည် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မဟုတ်ပါ
Com-SL မှာရှိတဲ့ Burjans Christmas နှုတ်ခွန်းဆက်ပွဲကနေမနေ့ကမင်းဘလော့ဂ်ကိုငါသိသွားခဲ့တယ်၊ သင်အမှန်တရားကိုမင်းအခုထိပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုသဘောကျမိတယ် (ငါလည်းမသိခဲ့ဘူး!) ။
စာဖတ်သူအချို့ကကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှချစ်ကြောင်း (ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ MuyLinux ဟုဆိုလိုသည်) ကိုလည်းအနည်းငယ်အံ့ of ဖွယ်ရာဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့မရှောင်တိမ်းရန်ရှောင်ရှားရန်မကောင်းသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ ဆိုက်အတွက်တာဝန်ရှိသူများကိုကျွန်ုပ်အကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ပေးပါမည်။ သင်က elav နှင့် KZKG ^ Gaara ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ MuyLinux အသစ်ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်ဘာမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ စာဖတ်သူနှင့်မှတ်ချက်များ၏နံပါတ်ကြီးထွားပါကပဲအရာဖြစ်တယ်။ အထောက်အထားအဖြစ်သင့်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောမည်သည့်ဘလော့ဂ်မဆိုရှိသည်။
ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကသူတို့စိတ် ၀ င်စားတဲ့အခါမှာအများဆုံးပူနွေးစေတဲ့အရာတွေနဲ့မပူရင်သူတို့ကမှတ်ချက်ကိုမကြောက်ဘဲ၊ အဲဒါကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မြင်ချက်အတိုင်းဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မတောင်းဆိုပါနဲ့။ " ပုန်ကန် "။ အကယ်၍ သင်မှားတယ်ဆိုရင်၊ အချိန်ကုန်ခံပြီးဘယ်သူမှမစုံလင်ဘူး။
"Firefox 9: More of the same" သို့မဟုတ် "I Love Opera" ကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများသည် MuyLinux ၏မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင့်လျော်တယ်လို့ထင်ရင်ဒီလိုမျိုးထုတ်ဝေဖို့ပြproblemနာမရှိဘူး၊ မင်းဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘာမှမရှိ ခေါင်းစဉ်မဲ့ခေါင်းစဉ်၊ တောင်းပန်ခြင်းနှင့်ဘလော့ဂ်အတွက်ဂုဏ်ပြုလွှာအတွက်တောင်းပန်ပါ၊ သင့်တွင်နောက်ထပ်စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
MetalByte ^^ မှကြိုဆိုပါတယ်။
ကောင်းပြီဟုတ်တယ်၊ မင်းဟာကမ္ဘာဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟင်ကမ္ဘာမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးကိုမင်းသိပြီဆိုတာသိပြီ။ အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာကိုလိုက်နာကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လူအများကမေ့နေကြသည် ဘလော့ဂ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်လိုချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသည်ဟုထင်မြင်သူ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆင်တူသည်၊ အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်၊ ငါ့ကိုစာဖတ်သူကသူရေးတဲ့စာကိုရေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကငါရေးတာကိုသူကြိုက်တာ၊
DesdeLinux ထဲကိုဝင်ဖို့ဘယ်သူမှလည်ပင်းကိုငါဓါးမထိုးသေးဘူး။ ထိုအခါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် KZKG ^ Gaara အတူတူထင်ရပေမည်။ ဒီနေရာမှာလူတိုင်းကသူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပြီးသူတို့ထင်မြင်ယူဆသလိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်သည်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာပူးပေါင်းသူနှစ် ဦး ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ သူတို့နားလည်ထားတာတွေကိုသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့အညီရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာ၊ ဝိသေသလက္ခဏာကိုထိန်းသိမ်းဖို့လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်။ ။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခြားသုံးစွဲသူတွေလိုပဲကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုမျှကြိုဆိုပါတယ်၊ သင်မှတ်ချက်ပေးလိုတဲ့အခါသင့်စိတ်ထဲကဘာကိုရိုက်မလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်မထားပါနဲ့။
မင်္ဂလာပါ MetalByte (သင် LOL သည်မိတ္တူတစ်စုံမဟုတ်ဟုယူဆလျှင် !!!)
Ya Elav သူကမင်းကိုပြန်ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူကိုရောက်ရှိရန်၊ အထွေထွေအကျိုးစီးပွားအကြောင်းအရာများထုတ်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး တည်းကိုနှစ်သက်ရန်မကြိုးစားပါ (ဥပမာ - X distro ဆောင်းပါးများကိုသာထုတ်ဝေသည်)၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည်။ စကားလုံး၏အယူအဆ။ သတိရသည်မှာစာဖတ်သူများ၏ ၁၀၀% သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုအမြဲတမ်းသဘောတူမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် ... ထုတ်ဝေရန်မသင့်ပါ။
အခုတော့မင်းကငါ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ... မင်းအမှားရှိနေပြီ၊ မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုံးဝမလွှဲမရှောင်နိုင်ဘူးလို့ငါမထင်ဘူး။
ပထမ ဦး စွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရေးဆရာများအားပိုမိုဓမ္မဓိobjective္ဌာန်ကျစေရန် (ဆိုလိုသည်မှာ)၊ တတ်နိုင်သမျှကြားနေရန်ကြိုးစားသည့်ဆောင်းပါးအချို့အတွက်နေရာချပြီးပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုမည်မျှကောင်းမွန်စွာတိုင်းတာသည်ဆိုသည်ကိုတိုင်းတာရန်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆောင်းပါးများ၏အရည်အသွေးနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးမကျပါ။ ဒီဥပမာတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်«Windows နှင့် Linux"ဒါမှမဟုတ်"Debian နှင့် Ubuntu“ သူတို့ဘယ်လောက်ပဲရည်ရွယ်ထားပါစေထောင်နဲ့ချီတဲ့လည်ပတ်မှု၊ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဝေးနေလျှင်ပင်။
အခြားမည်သည့် site နှင့်မတူလိုပါ၊ MuyLinux, WebUp8, OMG!, GenBeta သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် site ကိုမှကျွန်ုပ်တို့မလိုလားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာဖြစ်ချင်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူး၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကို“ ရူပါရုံ” နှင့်ယခုအထိရှိနေသည်။ ဤ“ အမြင်” နှင့်အခြားမည်သည့်နေရာမျှမတူကြောင်းသင့်အားအာမခံနိုင်သည်။
စာဖတ်သူများကမည်မျှချစ်ကြောင်းသင်ဖော်ပြသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သည်ဘာနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ မဟုတ် Elav ငါ MuyLinux နှင့်ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်တွေကျန်ရစ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် အထူးသဖြင့်သင့်အကြောင်းနှင့်သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ရှိသော်လည်း၎င်းကိုအချက်အလက်များနှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ပေးထားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုမဖော်ပြသင့်ပါ။
မည်သည့်နာမည်နှင့်မဆိုအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်များကိုစော်ကားသောလူများအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမတရားပုံစံဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းစားရေးရန်နှင့်အချို့သောနည်းဖြင့်ရေးသားရန်ဖြစ်သည်။ ဒေတာ။
စကားမစပ်ဒီမှာစာဖတ်သူတွေဟာသင်နဲ့ငါလို Metalheads တွေဖြစ်ပြီးပိုစတာသမား KZKG ^ Gaara မှလွဲ၍ သင် reggaeton player များဟahဟားကိုမတွေ့ရပါ
ကျွန်ုပ်သည် copy / fork xD မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းရန်ပထမအချက်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုထည့်သွင်းပြီးပါပြီ၊ အကယ်၍ သင့်ကိုအနှောင့်အယှက်မပြုခဲ့ပါကတစ်နေ့တွင် MuyLinux တွင်သင့်အားကိုးကားမည်မှာသေချာသည် (ဟုတ်ကဲ့၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများရှိနေသည်) ။
ဒုတိယနှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အမှားပြုမိလျှင်၊ သို့မဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ငါ့ကိုမယုံကြည်နိုင်လျှင် KZKG ^ Gaara သို့ညွှန်ကြားသည်။ ယခုသင်အခြေချပြီးကြီးထွားရန်လိုသည်၊ အဓိကအချက်ကမင်းလိုချင်တာကအရေးမကြီးဘူး။ ပြီးတော့တစ်ခြားနဲ့တစ်ခြားကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေဆီကနေမှတ်ချက်ရာနဲ့ချီပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီတဲ့ဗဟုသုတတွေရှိပေမယ့် "ဘာတွေရှိလဲ" ဆိုတာက၊ သင်ကတ်ကြေးကိုမထုတ်ယူဘဲသင်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ သင်ကအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လုံးဝအသစ်အဆန်းတစ်ခုခုလုပ်ချင်တာလည်းအရေးမကြီးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာသင်ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းများ၊ Genbeta သို့မဟုတ် esDebian အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ Espacio Linux စသည်တို့ကိုထုတ်ဝေနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "Windows VS Linux" သို့မဟုတ် "Debian VS Ubuntu" သည်များစွာသောကြိုးစားသော်လည်းလူတိုင်းမဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ MuyLinux နဲ့ပါတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ထုတ်ဝေတာတွေအားလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုံများစွာလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးမကြီးဘူး။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင် 2004 နှင့်ဝဘ်နှင့်အွန်လိုင်းစာပမြေားကိုပြောပြ) ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်အခြေအနေများမည်သို့ရှိကြောင်းကြည့်ရှုရန်၊ ဤစကားပြောဆိုမှုသို့ပြန်သွားပါမည်
ပြီးတော့ရဲစွမ်းသတ္တိကိုမပြောဘဲနေလို့မရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူရင့်ကျက်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီးသူ့ရဲ့ trollal အမြင့်ဆုံးကိုချန်ထားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းစာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းတွေမရှိဘဲရေးတာကောင်းတယ်၊ မင်းကမင်းကိုငါဘာမှမပြောဘူး၊ ငါလည်းမင်းကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေမယ့်မင်းနားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာ၊ သင်ဟာစာသားကိုတာဝန်ယူထားသည့်“ မခံမရပ်နိုင်” သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရား၏တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသောမိခင်ကိုအခြားဝတ္ထုများအကြားဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ကြ။ စကားမစပ်၊ ငါ့ထံမှဤသို့သောအဖြေကိုသင်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။
ကောင်းပြီ, ငါယခု billet နှင့်အတူပြီးပြီ။ နောက်တစ်ခါကျွန်ုပ်ဤတွင်ကျွန်ုပ်လာသောအခါ၊ အချို့သောသတင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် elav၊ KZKG ^ Gaara နှင့် Courage နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆိတ်ဆိတ်စွာဖတ်နေသော xD ကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုစောင့်နေသူများအားနှုတ်ဆက်သည်။
PS: တုံ့ပြန်မှုတွင်ကျွန်ုပ်၏ distro မည်သို့ပေါ်လာသနည်း။ ဒါဟာငါတီထွင်မှု hehe အားဖြင့်အပန်းဖြေဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
ubunto XDDDDDDDD ၏မိခင်။
ငါ့ကိုမှ လွဲ၍ အားလုံးအားနှုတ်ဆက်ပါ။ arghhhh xD ။
ငါပါဝင်ပတ်သက်ရပါဘူးတစ်ခုအဘို့ ... LOL
သင်အသုံးပြုသောတည်ငြိမ်မှုကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းသင့်အတွက် Firefox UserAgent ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်
လူကဒီမှာငါ့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှအမေမရိုက်ဘူး၊ ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်တွေအားလုံးရှိနေလို့သင်နောက်ထပ်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုမျှော်လင့်ထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်တွေအားလုံးရှိတယ်။ ငါမသိဘူး၊ မင်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါစိတ်ဆိုးမှာပါ
ထို့အပြင် Chakra နှင့်အော်ပရာကိုသုံးသောသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ Oo တွင်မည်သည့် distro ရှိကြောင်းမပြနိုင်ပါ။
သငျသညျသူကထားနိုင်အောင် svg သဲထံသို့ပေးပို့ရပါမည်
Chakra သည်ထင်မြင်ချက်များတွင်မပေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Chakra ကိုထောက်ပံ့ရန် plugin ကိုပြုပြင်ရမည် !!)
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသောအရာသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပုံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကျေနပ်နေပြီဖြစ်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုးကားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြပါ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုပြသခြင်းမရှိလျှင် (သင်အခြားတစ်ကြိမ်တွင်သင်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ) ဒါကြောင့်လည်းမှတ်ချက်များသတ္တုတွင်းလျစ်လျူရှု) ။
ဒုတိယနှင့် ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ သင်ပြောခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအချိန်သည်နောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ရဲရင့်ခြင်းအကြောင်း ... LOL !!! ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာအားလုံးကသူပဲ။ သူဟာဆောင်းပါးတွေကိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပြီးသူဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးထွားနိုင်ခဲ့တယ်။ (အနည်းဆုံးတော့ငါမြင်တဲ့အတိုင်း) ။ သူ၏ထင်မြင်ချက်များသည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ အသင့်အတင့် (သို့) လျော့နည်းနေပြီဟုသင်မြင်နိုင်သည်။ censor သည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည်အမြဲတမ်းရွေးချယ်သင့်သည်ဟုမထင်ပါ။ MuyLinux မှာသူနဲ့သူဆက်ဆံခဲ့တဲ့သဘောထားကိုငါမဝေဖန်ပါဘူး၊ ငါလည်းအလားတူလုပ်လိမ့်မယ်)
ယခု distro သည်တုန့်ပြန်မှုများတွင်ပေါ်စေရန်သင် browser ၏ UserAgent ကိုပြုပြင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းကိုများစွာရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သိသင့်သည်😉
ထိပ်တန်းနဖူးစည်းစာတွင်သင်အသုံးပြုသော distro ကိုလည်းရရှိသင့်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါပြောတာကိုငါပြန်ကြည့်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတစ်ခုခုသေချာပေါက်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် MuyLinux မှာရင်းမြစ်တွေကိုအမြဲတမ်းကိုးကားထားလို့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါမှတ်ချက်များထဲမှာသင်၏ nick ကိုရှာဖွေကြပြီးသင် Muon ၏ဝင်ရောက်မှုကိုဆိုလိုတာ။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်သင်မဖြေကြားခဲ့သောကြောင့်မကြာခဏဖြစ်သကဲ့သို့ (ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးနှင့်အမီလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုသတိမပြုမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှု, ပင်ပိုဆိုး) ။
ငါက Google ကတဆင့်ပုံရိပ်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒီ site ကိုတောင်မကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ငါပဲသုံးခဲ့တယ်။ ငါ့အမှားစိတ်မကောင်းပါဘူး အမှန်တရားကတော့ဒီအရာတွေကိုငါသိပ်အရေးမကြီးဘူး။ MuyLinux တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံများ (သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ဒီဇိုင်းများနှင့်များသောအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေထားသော) များ၊ ငါတို့နေရာများတွင်၎င်းတို့ကိုအကြွေးမပေးပဲသုံးလေ့ရှိသည်။ (အကယ်၍သာ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရေစာသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုထည့်မည်ဟု) ။ ဆိုလိုတာက Muon ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ desktop နောက်ခံရှိ icon နှစ်ခုလောက်သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မမှားပါကသင်သည်မူလဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုလမ်းမှားကိုမယူပါနဲ့! အကယ်၍ သင်သည်မူလဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်တူညီသောဖွဲ့စည်းမှုကိုရေးသားသူဖြစ်လျှင်ရုပ်ပုံထုတ်ဝေရေးအခွင့်အရေးကိုပြောခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပြisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါပို့စ်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့, ငါလင့်များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာရယူရန်ငါ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါဟာ Google မှပုံများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းပင်မဖြစ်မနေသို့မဟုတ်လုံးဝမလိုအပ်ဘဲရင်းမြစ်များကိုကိုးကားလေ့ရှိတယ်။
ငါတို့၏ရှိသည်ပေမယ့် Creative Commons အောက်ခြေရှိကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာများမဖြစ်သရွေ့ပြသနာမရှိကြောင်းငါသိ၏။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ထင်မြင်ချက်ကိုမှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းမယူပါနဲ့၊ တကယ်တော့ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ငါနည်းနည်းလေးလံတယ်ဆိုတာငါသိတယ် ...)
@Courage ငါလူစုလူဝေး၏ထင်မြင်ချက်တိုင်းကိုဖြေကြားရန်ကျွန်ုပ်မနှောင့်နှေးတော့ပါ၊ ၎င်းသည် MuyLinux သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျိုးနပ်ပါသည်။ ငါလိုချင်သောသူနှင့်အခြားမည်သူနှင့်မှအချိန်ဖြုန်းသည်
@ pandev92, လူကြီးမင်းကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်သပါ၏ (သင် Francesco မဟုတ်လား၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊ ငါ့ကိုနာမည်အပြည့်အစုံဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံသာ)
ကောင်းပြီ၊ Gecko ဟာထွက်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ see ကြည့်ရအောင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Francesco ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအော်ပရာ၏ဒုတိယသည်အယ်ဒီတာအကောင့်နှင့်ကျွန်ုပ်မဝင်ရောက်ပါ။
စာမျက်နှာများစွာတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်သောအခါ Firefox ကို "ဆွဲထားခြင်း" မှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်